XUKUUMADDA JAPAN AYAA OGGOLAATAY IN LA DUUBO, INKASTOO AY MAMNUUC TAHAY DHAMMAAN GOBOLADA - MAQAALLO
Xukuumadda Japan ayaa oggolaatay xadhkaha si ay ugaarsadaan, inkasta oo ay mamnuuc ka tahay dhammaan gobolada.
Iyada oo ogolaansho ah in lagu ugaarsado nuujiyada ayaa sheegay in masuuliyiinta Japan ay naftooda u yihiin, markii uu waddanku ka baxay Guddiga Caalamiga ah ee xayiraadda. Ka dib markii la mamnuucay 33 sano, laga bilaabo 2019, kalluumaystayaasha Japan ayaa awood u yeelan doona inay ku noqdaan dalxiiska ganacsiga.
Sida laga soo xigtay BBC, Xeerka Ciqaabta Banaadir ee Jabbaan ee 1986 waxaa keliya oo jiray "warqad". Arin ahaan, waa la mamnuucay, laakiin caleemaha ayaa weli ku hawlan soo saarida hilibka hilibka dhirta oo si sharci darro ah loogu iibiyo dukaamo iyo makhaayado.
Ilaa hadda wixii ka danbeeyay 1986, mamnuucista xayiraadda ayaa la siiyay si joogto ah. Wadamada Scandinavia iyo Japan, halkaas oo isticmaalka kitenku yahay dhaqan, ayaa la rumeeysan yahay in mamnuucidda kalluumeysigu ay noqon karto mid ku-meel-gaadh ah illaa ay dadku dib-u-bilaabaan.
Yoshihide Suga, Xoghayaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Japan, wuxuu ku doodayaa in Japan joojin doonto kalluumeysiga biyaha Badda Antarctic, iyo baradhada ayaa lagu qaadi doonaa oo kaliya degaanka biyaha ee gobolka. Dhanka kale, wakiilo ka socda Greenpeace ee Japan ayaa dalbanaya dib-u-eegid ku saabsan go'aanka ah in la ugaadhsado.